E jidere Peter M. (site n'aka nwanna ahụ kwere ekwe nke Jeroen Pauw): Martin Vrijland
E jidere Peter M. (site na nwanna ahụ na-ekwenye n'aka Jeroen Pauw)
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 June 2019	• 3 Comments
Ị na-ahapụ nwanyị nwere àgwà àgwà dị mkpa 10 nkeji Jeroen Pauw na tebụl na Netherlands dum kwenyesiri ike na Peter M. n'ihi na enweghị oxygen mgbe a mụrụ ya aghọwo ihe dị egwu na ọ chọrọ ime ihe niile nye nne ya n'ejighị ọgwụ. Ma nwanne m nwanyị na-eleta Peter fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ọ bụla, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka mmekọrịta ya na Pita daa mbà mgbe egwu niile ahụ gasịrị na mama. Ọ naghị adabara gị ezi uche? Ọfọn, mgbe ọ na-abịa ịmebata iwu ọhụrụ ị ga-anabata ma ọ bụrụ na enweghị ọrụ a niile. Ya mere, Peter M. dị ka usoro mgbasa ozi si dị kwụsịrị ọzọ (ọ dịkarịa ala na nke ahụ na-eme ka akụkọ ahụ bụrụ ihe a ga-ekwenyekwu).
Ka e were ya na nwanyị a na "nwanna nwoke" ahụ na-enyo enyo enwetawo ego maka ime ihe iji mee ka iwu ndị uweojii na-agbasi ike, mgbe ahụ, ọ bụghị naanị ngwa ngwa ka ego ego Judas bara, ma mgbe ahụ, onye Netherlands ga-achọ ime ihe ahụ. .
Nwanna Peter adịghị adị, n'ihi na foto na vidiyo nwere ike ịdabere nanị na nwanne nwanyị ma kee site na ngwanrọ miri emi. Otú ọ dị, nkà na ụzụ na-aga nke ọma na ọbụna nwanne Pita nwere ike ịmara na ndị ọzọ fọdụrụ na Netherlands, n'ihi na ihu ya nwere ike ịmalite n'oge ọ dị na tebụl Jeroen Pauw site na ntanye ihu. Ọ bụ TV na ị gaghịzi ama ihe ị na-ahụ (dị ka a kọwara na isiokwu a). Site na 19e nkeji na Mgbasa ozi ikuku Pauw na-egosi n'enweghị anya ma ọ bụ mebie otú ha si nwee ụdị ngwanrọ dị iche iche na ụlọ ọrụ ebe ahụ iji mee ka mmadụ dịkwuo okenye, dịka ọmụmaatụ. N'oge ahụ, ọ bụ maka ọkwa ụta ọhụrụ ahụ na nsoro Jeroboam na-eweta ngwa foto nke ụfọdụ ndị ọbịa na tebụl, nke gosipụtara otú ha si ele anya ezumike nká ala.
Ụlọ ọrụ TV, John de Mol na ANP nwere ngwanrọ ị nwere ike iche n'echiche na gịnị mere na ha agaghị eji ya iji ghọgbuo ndị mmadụ? Ị chere na nke ahụ adịghị oke mma? Gee ntị na usoro ndị a ga-agbanye azụ na oge na-abịanụ. Na ụzọ mgbapụ nke Peter M. ga-eme ka o doo anya na ndokwa agaghịzi abụ nhọrọ nakwa na a ga-elebara ezinụlọ anya ugbu a na mkpebi nke ijide mmadụ, ha niile zoro ezo na ọnwụ a. Ma n'ezie ọ nwere iji gosipụta Anne Faber akụkọ ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, o doro anya na site na ugbu a na ụlọ ọgwụ nanị ka a ga-agbanye n'ụlọ mkpọrọ. Gụọ gị ebe a ọzọ ot 'u isi ikpe mkpegbu di iche iche (nke puru ime ka ndi mmadu nwee ike ime uche) kwesiri iduga ndi ome iwu ohuru na nke ha.
Okwu ikpe kachasị nke ndị mgbasa ozi dị ugbu a nwere okpukpu abụọ ma otu n'ime okpukpu abụọ ahụ bụ na anyị ga-aghọ ndị na-agbagha kpamkpam nye onye ọ bụla a kọọrọ na-efughi (via ngwa ngwa Sherlock). Ndị a nwere ike ịbụ ndị na-eto eto eto eto na-arụ ọrụ na ya ọchịchị siri ike ọtụtụ na-agbalị ịgbanahụ ụlọ ọrụ ndị ntorobịa na na ọ pụkwara ịbụ ndị ga-apụ n'anya n'ọdịnihu dị ka ndị na-adịghị mma, ọtụtụ agaghị echegbu onwe ha. Nraranye ahụ na-aghọ ụdị egwuregwu Pokémon ịchụ nta. Ndị mmadụ na-ejikọta ihe ngosi mgbasa ozi nke na-enye echiche na ha nile na-arụ ọrụ ọma. Nbudata ngwa ahụ na-enyekwa ohere oge zuru oke iji igwefoto gị, igwe okwu na data ebe, ya mere a ga-ejikwa iwu kwadoro gị, mana nke ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, onye ọ bụla nke na-ekerịta isiokwu m na Facebook ga-emerụ akwụkwọ mpịakọta obodo na-ekwu na ọ bụ enyi, onye maara ya, onye òtù ezinụlọ nke protagonist, iji kụda ndị na-ekerịta isiokwu ndị a ma na-ejide onwe ha n'ọrụ. N'elu ihe ndekọ profaịlụ ndị a na-abụkarị Inoffizieller Mitarbeiter ma ọ bụ na ị na-agwa onye ọrụ AIVD onye na-ezo n'azụ profaịlụ miri emi (jikọtara na profaịlụ ọzọ miri emi, nke mere na profaịlụ dị otú ahụ aghaghị inwe netwọk mmekọrịta mmadụ na ya). Ịdị nkọ nke mwakpo ahụ dị oke egwu nke na ọtụtụ ndị anaghịzi enwe ike ịkọrọ ma ọ bụ amasị isiokwu. Adịla n'ogige!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl
Na-achọsi ike nke a na-egwu PBS ọrụ si Den Kolder
Anja Schaap na-efu ugbu a pụtara a PsyOp? Lee ihe mere (video)
Tags: na, madder, agba, enweghị uche, chọtara, Jeroen, ụlọ ọgwụ, M., ọrịa, Ebube, Peter, psychiatric, azụ, mgbasa ozi, nwanne
7 June 2019 na 08: 47
Enwere m ike ịgwa m ihe mere nwanne nwanyị ahụ a sị na ọ bụ Peter M. ji were aka ya na TV? Okwesịrị ka onye ọ bụla na-achọghị ịbịa na TV ma ọ bụrụ na otu onye òtù ezinụlọ ya jụrụ na-echekwa ihe dị ala. Onye ọ bụla nwere ike ịgwa m ihe kpatara Peter M. onye dị oke ize ndụ ma ghara ịrụ ọrụ na-enweghị ịhapụ ọgwụ? Kedu aha onye dọkịta na-emeso ya? Ọ dịlarị na TV na State Pauw kọwaara ya? Ọ bụ na onye dọkịta dị otú a adịghị agbagha ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị nyochaa?
Gịnị bụ mba rụrụ arụ, nke ihu abụọ bụ nke a? Ngwọta na ụmụ okorobịa ahụ si na edemede ahụ.
7 June 2019 na 09: 03
Ọ bụ n'ezie akụkọ zuru ezu a na-apụghị ikweta ekweta. Onye na-enweghị ike ịrụ ọrụ na-enweghị ọgwụ ndị a na-enye ikpe na-ahapụ ịmekọrịta ọzọ.
Ọ naghị eme ihe ọbụla ma ọlị.
Ooh ee na mgbe ahụ akụkọ nke "atọm bombu" .. nke ahụ n'ezie ọ bụ onwe ya.
Ha na-eji akụkọ na-agbawanye agbagwoju anya na ndị mmadụ na-abanye n'ime ya n'ihi na mmadụ na-akọ akụkọ banyere poker ihu Jeroen Pauw na ndị ọbịa niile nọ na tebụl bụ ndị ụgha na-eme ihe na-akwado akụkọ ahụ.
7 June 2019 na 10: 22
Iche, ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye. Amaghị m ebe kpọmkwem na ogologo oge Peter M. kwụsịrị kemgbe a gbapụrụ ya. Ka ọ bụ na ha egosiworị ya ụzọ ọ ga-esi gaa? Kedu ihe o riri ma ṅụọ? Enweghị agụụ, akpịrị ịkpọ nkụ, ụlọ mposi? Enwere ụgwọ a? Ọ nwere eriri ụkwụ ụkwụ ụkwụ? Ntak-a? Etc.
" Na-achọsi ike nke a na-egwu PBS ọrụ si Den Kolder
I nwere ike iweta mgbanwe na nhọrọ gị. »
Nleta nile: 14.486.977
Nnukwu Sinterklaas na-akwalite: ọmarịcha ihe ịtụnanya mara mma!
Mmiri op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
SandinG op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
2 igwefoto op Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersum na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'onye akaebe ịgba okpu'?
SalmonInClick op Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka
2 igwefoto op Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka